Inona ny Lohan'ny tombo-kase?
Ny Seal Head dia ampiasaina hanidiana ny faran'ny fitoeran-javatra ka ny atiny anatiny sy ivelany dia mitoka-monina, fantatra koa amin'ny hoe fonony farany. Ampahany amin'ny kaontenera iray izy io ary ampifandraisina amin'ny varingarina amin'ny fantsom-by. Araka ny endriny geometrika samihafa, azo zaraina ho hemispherical, ...
Ny vokatry ny fizotran'ny fitsaboana hafanana amin'ny toetra mekanika amin'ny akora vy
Ny fitsaboana hafanana ny metaly dia dingana iray izay anaovan'ilay vy ny hafanana amin'ny maripana mety amin'ny medium iray, ary avy eo dia nangatsiaka tamin'ny hafainganam-pandeha hafa rehefa voatazona BAI amin'ity mari-pana ity mandritra ny fotoana voafaritra. Ny fitsaboana hafanana metaly dia iray amin'ireo dingana lehibe amin'ny mekanika ...
Ahoana ny fomba hisafidianana fitaovana ara-mekanika?
Ny faritra mekanika dia manondro ny singa fototra ao amin'ilay masinina, toy ny kofehy, visy, lakile, baraingo, volombava, lohany lohataona, sns. ampiasaina amin'ny milina isan-karazany, faritra manokana ...